Dhiig la daadiyey ayaa lagu gor gortamayaa | allsanaag
Dhiig la daadiyey ayaa lagu gor gortamayaa
Xadka markaynu soo xirno Soomaaliya waxaan kula hadli doona dalka Ghan
Hogaamiyaha SNM Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay in 19-ka bisha March uu dalka Ghana ka dhici doona Wada hadalada dowladda Soomaaliya iyo Maamulka SNM.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore shaacisay inay diyaar u tahay in dib loo soo celiyo wada hadaladii SNM oo hakad galay sanadkii 2015 xilligaasoo u dambeysay wada hadalo labada dhinac dhex maro.
Wada hadalada Soomaaliya iyo SNM ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladda Turkiga, iyadoo Safiirkii hore Olgan Bekir u soo magacawday inuu noqdo Ergeyga Turkiga u qaabilsan wada hadalada Soomaaliya iyo SNM.
← Wasiiro iyo Xildhibaano ayaa gaadhey gobolka Sanaag. Warxumo tashiilkii shirka fadhiyey →